सचिन परियारलाई आमाको काखबाटै खोसेर भागे तेजेन्द्र (भिडियो)
सोमबार, बैशाख ०६, २०७८ मा प्रकाशित
बाल गायक सचिन परियारको आफ्नो जन्म दिने आमा सरिता परियार लाइ भेट्ने सपना पुरा भएको छ। आमा छोराको भेट हुने बित्तिकै रुवावासी नै चलेको थियो । बर्षौ देखि कान्छी आमासंग बसेका सचिनले आफ्नो आमालाई भेट्न पाउदा निकै खुसि देखिन्थे ।
सचिनका बाबु तेजेन्द्र परियार ले कान्छी ल्याएपछी सौता सहन नसकेर सरिता पनि अर्कै पुरुषसंग बिबाह बन्धनमा बाधिएकी थिइन । सचिन मिडियामा छाउन थालेपछी सरिताले आफ्नो छोरालाई भेट्न खोजे पनि श्रीमानले भेट्न नदिएको उनले बताएकी थिइन ।
आमा छोराको भेटमा माया साट्न नपाउदै श्रीमान तेजेन्द्रले सचिन र छोरीलाई जवर्जस्ती खोसेर लगेपछी एकछिन तनाब नै सिर्जना भएको थियो । भाइरल सचिनलाई खोसाखोस गर्दै गर्दा कतै सचिनको भविष्य त डामाडोल हुने होइन ? ठुलोको लडाई चलीरहदा कतै बाल शोषण त भएको छैन ? भन्ने निकै गम्भीर प्रश्नहरु अहिले उठ्न थालेको छ ।
सचिन अहिले ९ बर्षका बालक हुन् उसको अहिले पढ्ने खेल्ने उमेर हो । तर उनको पढाइ नै बिगारेर भिडियो छायांकन, महोत्सब देखि दोहोरीको विभिन्न कार्यक्रममा लगेर पैसा आर्जन गर्ने मेशिन बनाएको आरोप समेत लागेको छ ।
यसो हो भने निश्चीत रुपमै सचिनको भबिष्य डामाडोल देखिन्छ ।